DHAGEYSO Saraakiisha Soomaaliya oo sheegay inay saldhigyo AL-shabab burburiyeen. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Saraakiisha Soomaaliya oo sheegay inay saldhigyo AL-shabab burburiyeen.
Taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya Generaal Maxamuud Macalim Koronto oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay howlgaladii ugu danbeeyay ee ciidamada xooga Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe oo horay ay ugu sugnaayeen ururka AL-shabaab.
Taliyaha ayaa tilmaamay in howl galo gaar ah oo ciidamda xoogu ka fuliyeen gobolkaas ay ku burburiyeen saldhigyo iyo doomo ay Al-shabaab la haayeen,aysana jirin dagaal halkaas ka dhacay balse ciidamadu si nabad ah ula wareegeen dhamaan deegaanadaasi.
Taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya Generaal Maxamuud Macalim Koronto ayaa shacabka ku nool deegaanada ay howl galada ka fuliyeen ku bogaadiyay sida ay ciidmada amaaka ula shaqeeyaan wuxuuna xusay in wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka deegaanku ay sababtay in goobo horleh laga qabsado ururka AL-shabaab.
Dhanka kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin xoogaga shababaku ay dhibaato ku hayaan shacabka wuxuuna sheegay inay lagama maarmaan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan goobahaasi AL-shabaab looga saaro.
Dowlada dhexe ee Soomaaliya ayuu ku eedeeyay inaysan wadin dagaal ka dhan ah Al-shabaab halka uu ciidamada AMISOM ku amaanay howlgalada ay ka hayaan Soomaaliya.
← Ammaanka imtixaanada maanta billaabanaya oo si weyn loo adkeeyay
Trump, Erdogan hold phone conversation on Khashoggi →